Soomaaliya iyo Turkiga oo kala saxiixday heshiisyo dhanka Horumarinta iyo Dhaqanka
4:19 am - Sunday September 24, 2017
Home » Wararka » Soomaaliya iyo Turkiga oo kala saxiixday heshiisyo dhanka Horumarinta iyo Dhaqanka
Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kala saxiixday heshiisyo iskaashi ah, iyadoo wada hadalo labo geesood ah uu dhex maray Wafdiga Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Erdogan iyo Wasiiradiisa.
Wasiiradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kala saxiixday heshiisyo iskaashi oo labada dal dhex maraya, kaasoo kala ah dhanka horumarinta, dhaqaalaha iyo dhaqanka.
Shir jaraa’id oo labada Madaxweynaha ayay uga hadleen arrimo badan oo quseeya xiriirka labada dal oo meel aad u wanaagsan maraya.
Madaxweyne Erdogan ayaa boggaadiyay dowladda cusub ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo, waxaa uu sheegay in Turkiga sii laba jibaareyso taageerada tooska ah ee uu siiyo dowladda Soomaaliya.
Erdogan ayaa ku dhaleeceeyay Beesha Caalamka, in aysan ahmiyad weyn siinin kaalmeynta shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan gurmadka abaaraha oo aanay ka dhabeyn balan-qaadyo ay horay u sameeyeen.
Sidoo kale Madaxweyne Farmaajo ayaa u mahad celiyay shacabka iyo dowladda Turkiga, waxaana uu tilmaamay in mar walba ay taageero la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed, isla markaana horay gacan uga geysteen arrimo badan oo horumarinta iyo dib u dhiska dalka ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku casuumay Madaxweyne Erdogan inuu booqasho ku yimaado Soomaaliya, sida ugu dhow, sida ay shaacisay Wakaalada wararka ee Anadol.
Galmudug oo sheegtay in doorashada Madaxweynaha ay waqtigeeda ku dhici doonto
Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada NISA oo lagu dilay Degmada Shibis